Col Bare Hiiraale oo Kismaanyo ka baxay,Kenya oo dagaalka si toosa u gashay iyo wararkii ugu danbeeyey. | Salaan Media
Col Bare Hiiraale oo Kismaanyo ka baxay,Kenya oo dagaalka si toosa u gashay iyo wararkii ugu danbeeyey.
Barre Aadan Shire, Hiiraale oo maanta si xoog ah ay uga saareen Kismaayo ciidamada Kenya iyo dagaalamayaasha Axmed Madoobe oo is-kaashanaya ayaa waxa uu shaacaiyay in uu ku suganyahy duleedka magaalada uuna isu diyaarinayo qaabkii uu ugu laaban lahaa gudaha magaalada laga soo saaray.
Barre Hiiraale ayaa waxa uu yidhi, “Duleedka magaalada ayaan ku sugannayahay. Waan isi soo hubeyneynaa waana ku noqonayaa Gudaha magaaladaa waxaa ka socda wax ka baxsan xeeraraka dagaalka aduunka oo ay kamid yihiin kufsi, Boob iyo tacadiyo dheeraad ah oo ay hor-seed u tahay Kenya. Innaga waxaaa magaalada naga soo saaray Kenya. Iyada ayaa hada maamuleysa magaalada oo xaquuqdeenna na duud-siisay”.
“Waxyaabaha aan uga baxnay magaalada waxaa kamid ah in dhibaata culus shacabkii loo geysanayo oo madaafiic lagu duqeynayo arintaasina aysan joogsaneyn hadii uu dagaalku sii socdo dadka dhamaanayaana ay dadkeennii yihiin. Waxa aan u tudheynaa Shacabka. Xeelad meleteri ayeey aheyd ee ka maqnaan mayno”, Barre ayaa intaa ku daray hadalkiisa.
Waxa uu Barre Hiiraale ka jaabay su’aal laga weydiiyay xadhiidhka ka dhexeeya kooxdooda iyo Shabaab maadaama lagu eedeeyo in ay iska ka shanayaan dagaalka Axmed Madoobe arintaas oo uu ku sheegay mid waxba kama jiraan ah hasa yeeshee ay dhici doonto in Shabaabka iyo inta diidan Kenya ay u midoobo doonaan ka xureynta dalka ciidanka Kenya ee soo duulay iyo calooshood u shaqeestayaasha ay difaaca ka dhiganayaan.